Sida looga dhagaysto raadiyaha internetka aalad kasta | Wararka Gadget
Sida looga dhagaysto raadiyaha khadka tooska ah aalad kasta
Qolka Ignatius | | Ciyaartoyda, Streaming
Waqtigan xaadirka ah wax walba ama ku dhowaad wax walba waxay ka dhacaan internetka. Thanks to internetka waxaan dhageysan karnaa hees kasta oo aan dooneyno, daawo qeybta ugu dambeysa ee taxanaheena aan ugu jecelahay ama filimaankii ugu dambeeyay ee la sii daayay. Waxaan sidoo kale heli karnaa saxaafadda dhaqameed, joornaalada iyo xitaa raadiyaha cimrigaaga.
Markii uu yimid adeegyada fidinta muusikada, Raadiyayaashu waxay arkeen sida ganacsigoodii aasaasiga ahaa uu usii kala dareerayay tartiib tartiib. Dadku waxay rabaan inay maqlaan heesaha ay ugu jecel yihiin, iyada oo aan xayeysiis lahayn iyo iyada oo aan soojeediyaha ay tahay inuu sameeyo paripe intaadan gashaneyn.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka internetka, ee la xiriira raadiyaha, ayaa ah inay noo saamaxeyso inaan ka dhageysano idaacadaha aan jecel nahay kombiyuutarkeena, iyadoo aan laga faa'iideysan raadiyayaasheena cimriga dheer, raadiyeyaasha u muuqda inay kaliya way qabtaan 40ka ama Raadiyaha 3.
Sidoo kale, kuwa nasiibka u yeeshay ama nasiibdarro u helay inay dibedda ku noolaadaan ama waqti dheer ku qaataan, waa hab wanaagsan oo lagula socdo wararka dalkooda iyaga oo aan loo baahnayn u leexo telefishanka dayax gacmeedka.
Habka ugu dhaqsaha badan ee lagu galo saldhigyada aan ugu jecel nahay si toos ah iyadoo loo marayo websaydhkooda. Laakiin waxaa jira nolol ka baxsan saldhigyada nolosha. Thanks to internetka, waan awoodnaa ka raadi saldhigyo gobolada kale ama dalal kale ee ku habboon dhadhankeenna, baahiyahayaga ama dookhyadayada.
Telefoonnadii ugu horreeyay ee laga bilaabay suuqa, isku dhafan qalab FM ah, Qeyb u ogolaatay inuu dhageysto raadiyaha dhaqameed (waxay u isticmaaleen samaacadaha sida anteeno). Nasiib darrose, waxay umuuqataa in soosaarayaashu ay aad iyo aad ugu yar yihiin shaqadan inkasta oo ay aad u anfacayaan marka masiibooyinka dabiiciga ay dhacaan isla markaana marinnada isgaarsiinta ee ugu muhiimsan ay joojiyaan shaqada.
4 Shabakadaha Raadiyaha
Radio Garden waa mid ka mid ah adeegyada shabakadaha ugu caansan uguna dhameystiran dhageysiga idaacadaha adduunka oo idil. Haddii biraawsarkayagu u oggolaado bogagga shabakadda inay marin ka helaan goobteenna, waxay na tusi doontaa saldhigyada ugu dhow mowqifkeena, taas oo inkasta oo ay umuuqato doqonimo, hadana maahan.
Waxay kuxirantahay meesha aan kujirno, waxay kuu soo jeedin doontaa meelaha ugu dhow ee saldhigyada laga heli karo, laakiin sidoo kale baaritaanka gobolada iyo wadamada kale. Haddii idaacadda aan raadineyno aan la helin, waan awoodnaa buuxi foom si loogu daro adeeggan.
Haddii aan ogaanno magaca idaacadda aan rabno inaan dhageysano, waan geli karnaa si aan toos ugu aadno saldhigga. Haddii tani aysan ahayn kiiska, oo aan dooneyno inaan dhageysano, tusaale ahaan, saldhig kasta oo ku yaal Venezuela, waan awoodnaa u gudub adduunka oo dhan waddanka oo dhagsii dhibcaha cagaaran ee kala duwan ee matalaya idaacadaha dalka.
Radio Garden ayaa sidoo kale lagu heli karaa qaab codsiga labada macruufka iyo Android, codsi aan si bilaash ah uga soo dejisan karno iskuxirayaasha soo socda.
Developer: Beerta Raadiyaha BV
TuneIn waa mid ka mid ah adeegyada ugu caansan ee loogu talagalay ka dhageyso raadiyaha internetka waddan kasta. Waxay noo ogolaaneysaa inaan ka helno in ka badan 100.000 oo idaacado adduunka oo dhan xayeysiis, inkasta oo aan bixin karno lacag bille ah si aan uga fogaanno xayeysiinta oo, si kadis ah, aan awoodno inaan ku raaxeysano ciyaaraha NFL, MLB, NBA iyo NHL.
Waxay leedahay tiro aad u tiro badan oo idaacado ku hadla afka Isbaanishka, labadaba Spain iyo Latin America, in kasta oo dhagaystayaasheeda ugu badani ay joogaan Maraykanka, halkaas oo aan ka dhagaysan karno idaacado badan oo dalka oo dhan ah. Waxaan sidoo kale awoodnaa dhegayso isla Podcast in aan ka heli karno madal kasta oo kale.
Waxay ku habboon tahay labadaba Amazon Echo sida Guriga Google ka socota Google marka lagu daro in laga heli karo ku hadlayaasha soo saaraha Sonos. Waxa kale oo loo heli karaa labadaba macruufka iyo Android, codsiyada aad ku soo dejisan karto bilaash adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasha soo socda.
TuneIn Radio: Wararka, Ciyaaraha & Xarumaha Muusikada AM FM
Si baaskiil idaacadaha ku yaal Spain, RadioFy waa adeegga aad raadineyso. RadioFy waxay na siineysaa interface aad u fudud oo aan ku qori karno magaca idaacada aan dooneyno inaan dhageysano ama aan dhex marno bogga ilaa aan ka helno idaacada aan rabno inaan dhageysano, halkaasoo kuwa ugu caansan lagu soo bandhigo.
Shabakadaha Raadiyaha Waxay na tusaysaa tusmada wadamada aan ka dhagaysan karno idaacadaha, markaa waa ikhtiyaar aad u fiican in la tixgeliyo haddii aad raadineyso saldhigyo ka socda waddamo cayiman. Adiga oo gujinaya waddan kasta, waxaan ka helnaa degel internet oo waddanka ah oo aan ka heli karno saldhigyada laga heli karo waddankaas gaarka ah.
myTurner waa mid kale oo ka mid ah bogagga shabakadda ee noo oggolaanaya ka hel idaacadaha ficil ahaan waddan kasta oo adduunka ah. Isla marka aad gasho boggaaga, waxaa la soo bandhigi doonaa idaacadaha dalka aan ku sugan nahay. Bidixda bidix, waxaan dooran karnaa haddii aan dooneyno inaan tusno kaliya saldhigyada bulshadayada ama gobolkayaga.
Haddii aad jeceshahay boodhadhka, 'myTurner', sidoo kale waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan, ficil ahaan isku mid ah oo aan ka heli karno barxad kale oo Podcast ah. Sidoo kale waxaa loogu heli karaa aaladaha mobilada qaab codsi ah, markaa haddii aanaan haysan kumbuyuutar gacanta lagu hayo, waxaan isticmaali karnaa taleefannadeenna casriga ah ama kaniiniga.
myTuner Radio oo ka socda Spain khadka tooska ah
Developer: Soo noqoshada - Raadiyaha, Podcasts, Ciyaaraha
Laakiin haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan dhageysano idaacadaha kale, helno heeso cusub, dhageyso noocyada kale ee muusikadaWaxyaabaha kor ku xusan midkoodna noogu adeegi maayo (qiyaas ahaan) sida Raadiyaha Internetku u shaqeeyo. Iyadoo loo marayo Internet Radio waxaan ku dhagaysan karnaa idaacadaha hadba nooca muusig ee ay tabiyaan, oo aan ku dhageysaneynin magaca idaacada ama meesha ay ku taalo.
Isla marka aad gasho shabakadda, noocyada ugu caansan ayaa la soo bandhigaa. Markaad gujineyso noocyadan, waa la soo bandhigi doonaa dhammaan saldhigyada bixiya nooca noocaas ah, hadday tahay polka, funk, naf, Tejano, anime, romantic, chill, riyo, jawi, qoob ka ciyaar, jazz, buluug, dhagax caadi ah, waddan, bir, salsa, hip hop ...
Maaddaama aan aragno xulashooyinka lagu heli karo heeso cusub oo Raadiyaha Internetku na siiyo, kama heli doonno saldhigyada dhaqameed ee waddan kasta. Haddii aan helno saldhig aan jeclaanno, waan awoodnaa kala soo bax liiska .m3u inaad ku soo saarto codsi kasta oo la jaan qaadaya adigoon isticmaalin websaydhka.
Internetka waxaa ka buuxa adeegyo noo ogolaanaya inaan dhageysano idaacadaha aan jecel nahay. Haddii ay ku jiraan xulashooyinka kala duwan ee aan kugu muujiyey maqaalkan, ma heli kartid saldhigga aad raadineyso, waxay u badan tahay inuusan jirin. Meel dheer ha u eegin, maadaama adeegyadani yihiin kuwa ugu ballaadhan ee la heli karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Sawir iyo dhawaq » Ciyaartoyda » Sida looga dhagaysto raadiyaha khadka tooska ah aalad kasta
Heshiisyada ugufiican qalabka (usbuuca 18-ka ilaa 24-ka May)